यो भिडियो हेरेर सायद आँखाबाट आँशु थाम्न सक्नुहुन्न होला । संघर्ष र सफल्ताको एउटा प्रेरणादायी स्टोरी, सुशान्त खत्री । सम्पुर्ण नेपालीहरुले गर्व गर्न लायक प्रतिभा, जस्को प्रतिभालाई सारा इन्डियाले गर्छ सलाम । भिडियो अन्त्य सम्म हेर्नुहोला ।
काठमाडौँ -प्रेमिका प्रियंकालाई भेट्न प्रेमी अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशी चलचित्रको छायांकनस्थलमै पुगेका छन् । फिल्ममा अत्याधिक व्यस्त भएर आयुष्मानलाई समय दिन नसकेपछि आयुष्मान प्रियंकालाई भेट्न मुम्बईबाट कोहलपुरमा आइपुगेका छन् । चलचित्र कोहलपुर एक्सप्रेसको छायांकनमा झन्डै एक सातादेखि व्यस्त प्रियंकालाई आयुष्मानले नभेटेको झन्डै दुई साता भएको रयि दुइको भेटघाटले यंकाको छायांकन सेड्युलमा भने प्रभाव नपारेको बताइन्छ […]
गायिका मोनालीसा पराजुलीको दोस्रो ईंग्लिश गीत ओ माई लर्ड भिडियो सहित सार्वजनिक भएको छ । पोजेटिव लभ स्टोरीमा आधारित यो गीत गायिका पराजुलीकै शब्द, संगीत, निर्देशन र अभिनयमा भर्खरै सार्वजनिक भएको हो । मिसन इन्टरटेनमेन्ट प्रा. ली.ले निर्माण गरेको गीतको भिडियोको शुटिङ र प्रोडक्सनको जिम्मेवारी पनि मिसन इन्टरटेनमेन्ट टीमले नै लिएको छ । नेपालमा रहेर ईंग्लिश गीत […]
काठमाडौं । अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह यतिबेला अष्ट्रेलियामा छिन् । स्वदेशमा राम्रै चलेको उनको पछिल्लो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर २’ प्रिमियरका लागि उनी अष्ट्रेलिया पुगेकी हुन् । यतिबेला, चलचित्रभन्दा पनि अभिनेत्री साम्राज्ञीले रेड कार्पेट प्रिमियमा लगाएको पहिरनको राम्रै चर्चा भइरहेको छ । रातो पारदर्शी पहिरनमा रेड कार्पेटमा देखिएकी सामाग्री निकै हट देखिएकी छन् । उक्त […]
काठमाडौं । गायक अरुण तमाङको नयाँ गीत घर मेरो ओखलढुङ्गाको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । भिन्न शैलिका गीतहरु निकाल्न सिपालु चर्चित गायक तथा संगीतकार अविशेक तामाङको संगीतमा गायक अरुण तामाङले नयाँ भिडियो हालै सार्वजनिक गरेका छन । भिडियोमा अभिनयमा मोडल सृजना तामाङ र सोनाम पाख्रिनले साथ दिएका छन् । साङगे लामा ब्लोनको शब्द र नोर्बु […]
यी हुन संसारको सबैभन्दा धनी १० हिरोइनहरू (भिडियो हेर्नुस)
अमेरिका नेपाल, आजभोली चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो विकास आईसकेको छ। हरेक देशमा जमानानुसार सिनेमा बनाउने र व्यापार गर्ने होडबाजी नै चलेको छ यो समयमा। चलचित्र मनोरंजनको निम्ती बनाईन्छ तर प्रत्येक चलचित्रले कुनै न कुनै कोणबाट समाजलाई केही शिक्षा दिन खोजीएको हुन्छ।विश्वमा अहिले सिनेमा व्यपार धेरै फराकिलो रूपमा चलिरहेको छ। चलचित्रमा लागेर आफ्मो जीवनको अमूल्य समय विताउनेहरू […]
एक दिन धुर्मुसे टन्न खाना खाएर सुतेछ…
बल्छीले धुर्मुसे साइकलको ब्रेक हातमा लिएर बिहे पार्टीमा नाचिरहेको देखेछ। बल्छीले भनेछ : ओए धुर्मुसे,साइकलको ब्रेक हातमा लिएर के गरेको ? धुर्मुसेले भनेछ : देखिनस्, ब्रेक डान्स गरेको ? ००० शेरे : ल भन धुर्मुसे, तँ खाली पेटमा कतिवटा स्याउ खान सक्छस् ? धुर्मुसे : ६ वटा शेरे : गलत जवाफ। एउटा स्याउ खानेबित्तिकै तेरो […]
निश्मा र गम्भिर बिहे बन्धनमा बाँधिदै
नेपाली फिल्ममा अहिले कोरियोग्राफीमा गम्भिर बिष्टको चर्चा छ । गम्भिर कोरियोग्राफीमा जमेका मात्र छैनन्, नयाँ नयाँ प्रयोग पनि गरिरहेका छन् । गम्भिर फिल्मदेखि म्यूजिक भिडियोको कोरियोग्राफीमा व्यस्त छन् । अब, उनै गम्भिर बिहे बन्धनमा बाँधिन लागेका छन् । उनले, केही फिल्ममा अभिनय गरेकी कलाकार तथा मोडल निश्मा घिमिरेसँग बिहे गर्न लागेका हुन् । निश्मा र […]
नेपाल आइडलको टोली अष्ट्रेलिया आइपुग्यो, शुक्रबार क्यानबेरा तताउने
सिड्नी । चर्चित गायन प्रतिभा खोजी कार्यक्रम नेपाल आइडलको विजेता टोली अष्ट्रेलिया अवतरण गरेको छ । अष्ट्रेलियाका विभिन्न शहरमा नेपाली टचले आयोजना गरेको कन्सर्टमा प्रस्तुतीका लागि आइडल विजेता टोली अष्ट्रेलिया आएको हो । नेपाल आइडलका विजेता वुद्ध लामा सहित फस्र्ट रनरअप निशान्त भट्टराई, सेकेन्ड रनरअप प्रताप दास र कार्यक्रम प्रस्तोता सुसिल नेपाल अष्ट्रेलिया आइपुगेका हुन् […]